Trial Program တွေကို အမြဲသုံးလို့ရအောင် — MYSTERY ZILLION
281 Mobile Devlopment
40 other mobile
Trial Program တွေကို အမြဲသုံးလို့ရအောင်
ကျွန်တော်တို့တွေ Program တွေသုံးတဲ့အခါ Trail Version တွေကို အများအားဖြင့် သုံးကြရပါတယ်။ Trial ကာလ ၁ လ ပေးတာတို့ ၊ ၁၀ ရက် ပေးတာတို့မျိုးပေါ့။ ၁၀ ရက် Trial version ဆိုရင် ၁၀ ရက်ပြည့်တဲ့အခါ Your Trial Version is Expire ဆိုပြီး သုံးမရတော့ဘူးလေ။ အဲဒီလို Expire မဖြစ်ရအောင် လုပ်နည်းလေးပါ။ အရင်တုန်းကတော့ program expire မဖြစ်ခင် computer date ကို ရှေ့ပြန်တိုးပေးလိုက်ရင် အဆင်ပြေသွားပါတယ်။ အခုတော့ RunAsDate ဆိုတဲ့ Program လေးကို တွေ့လိုက်ပါတယ်။ ဥပမာ- Program တစ်ခုကို ၂၀၀၈ ၁ လပိုင်း ၁ ရက်နေ့မှာ install လုပ်မယ်၊ သူ့ရဲ့ Trial ကာလက ၁၀ရက်ပေးတယ်ဆိုရင် အဲဒီ Program ဟာ ၂၀၀၈ ၁ လပိုင်း ၁၁ ရက်နေ့ရောက်ရင် သုံးရမှာမဟုတ်တော့ပါဘူး။ ဒါကြောင့် အဲဒီ Trial Program ကို RunAsDate ဆိုတဲ့ Program ကနေတစ်ဆင့် ၂၀၀၈ ၁လပိုင်း ၁ရက်နေ့အနေနဲ့ပဲ အမြဲ run ခိုင်းပြီး သုံးမယ်ဆိုရင်် ဘယ်တော့မှ expire ဖြစ်မှာ မဟုတ်တော့ပါဘူး။ တကယ့်အသုံး၀င်တဲ့နည်းလေးမို့ တင်ပေးလိုက်ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
RunAsDate Program အတွက် Download Link ကတော့
အကိုတစ်ယောက်ရဲ့ blog တစ်ခုကနေ copy လုပ်လိုက်ရပါတယ်ခင်ဗျာ...:P:P:P:D:D:D:))
ဘန်း ထားလို့upload လုပ်ပြီးတင်ပေးလို့ရမလားမသိဘူး
burn ထားတယ် ဆိုရင် ဒီမှာ ဒေါင်းပါ ):)):))
အကိုရေ ... ၇ဘူးဗျ !!
ဒါဆိုရင် အဲ့ဒီ link ကို click မလုပ်ဘဲ နဲ. copy>> paste
မရရင်ပြန်ပြောနော် အနော်. GMAIL က [email protected] ပါ:)):)):))